Nepalistudio » हामी टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बन्छाैं साथै एक दिवसीय विश्वकप हाम्रो अबकाे लक्ष्य हाे : कप्तान खड्का
हामी टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बन्छाैं साथै एक दिवसीय विश्वकप हाम्रो अबकाे लक्ष्य हाे : कप्तान खड्का
हामीले हाम्रो घरेलु संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। अब देशभित्र र द्विपक्षीय रुपमा खेलहरु बढी भन्दा बढी आयोजना गर्नु आवश्यक छ।
विश्वकप छनोटमा गत बिहीबार पपुवा न्यूगिनीलाई पराजित गरेको नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको छ। नेपाली क्रिकेटको याे ऐतिहासिक उपलब्धिमा कप्तान पारस खड्काकाे याेगदान विशिष्ट छ। नेपाली राष्ट्रिय टाेलीका कप्तान खड्कासँगकाे अन्तर्वार्ता:
नेपालले पहिले देख्दै आएको एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय मान्यताको सपना पुरा भयो हैन् त?
पपुवा न्यूगिनीविरुद्धको खेल सुरु हुनुअघि नै हामीलाई थाहा थियो कि हामीले यो खेल जसरी पनि जित्नुपर्छ। त्याे महत्वपूर्ण खेलमा हामीले टस जित्यौं। बलरहरुले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे र जवाफी ब्याटिङ गर्दै हामीले लक्ष्य पनि भेटाउन सफल भयौं। तर, पनि अझै हामीलाई नेदरल्याण्ड्स र हङकङबीचको खेलको नतिजाको पखाई थियो। हामी होटल फर्कियौं। अनि सो गेमको स्कोर रिफ्रेस गर्न थाल्यौं। नेदरल्याण्ड्सले खेल जित्यो। हङकङको दशौं विकेट झरेसँगै हामीले हाम्रो इतिहासमा पहिलोचोटी एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायौं। जसको सपना धेरै पहिले देखि नै हामी देख्दै आएका थियौं। अहिले २०१८ मा आएर त्यो सपना बल्ल पुरा भयो।
तपाइँको कप्तानीमा नेपालले एक दिवसीय अन्तरार्ष्ट्रिय मान्यता पाउँदा कस्तो महसुस भइरहेकाे छ?
राेमाञ्चक अनुभव भयो। अहिलेको मात्रै हैन्। विगतको यस टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नु मेरा लागि अमेजिङ यात्रा रह्यो। खेलाडी तथा प्रशिक्षकको धेरै कडा मेहनतको परिणामस्वरुप आज हामी याे स्थानमा छौं। एकदिवसीय मान्यता पाउनु एउटा कुरा हो। तर, हामीले अझै अगाडि बढ्न चाहिने महत्वपूर्ण कुराहरू गर्न बाँकी छ। हामीले यसलाई दिगो रुपमा अगाडी बढउन सक्नुपर्छ र हामी अझै बलियो बनेर आउनुपर्छ।
एक दिवसीय लक्ष्य प्राप्त भइसके पछि नेपालको अबको लक्ष्य के हुन्छ?
हामीले हाम्रो घरेलु संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। अब देशभित्र र द्विपक्षीय रुपमा खेलहरु बढी भन्दा बढी आयोजना गर्नु आवश्यक छ। पहिलो महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले हाम्रो क्रिकेट बोर्ड फिर्ता पाउनु नै हो। अझै पनि नेपाल क्रिकेट संघ आइसीसीको निलम्बनमा छ। आउँदो जुलाईमा प्रतिबन्ध हट्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै, क्रिकेट अघि बढ्नका लागि व्यवस्थित बोर्ड हुने आशा गरेका छौं। हामीसँग भएका स्रोतहरु साधानको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई बोर्ड चाहिएको छ।
नेपालको विश्वकप छनोटको समग्र प्रदर्शनलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ?
यो सानदार रह्यो। विश्वकप छनोट खेलेको हामीले यो दोस्रो पटक हो। अघिल्लोपटक न्यूजिल्याण्डमा भएको विश्वकप छनोटमा हामीले पहिलोपटक सहभागिता जनाएका थियौं। त्यसपछिका तीन चार वर्षमा हामीले यस लेभलमा कस्तो प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभुति गर्यौ र त्यसअनुरुप खेल सुधार पनि गर्न सक्यौं। हामी अझै सिक्ने चरणमा छौं। हामी चाहान्छौं एकदिन हामी टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बन्छाैं। त्यहाँ पुग्न अझै आठ दश वर्ष लाग्न सक्छ। अहिले हामी एक दिवसीय राष्ट्र बनेका छौं। हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने हो।
(कप्तान पारस खड्काले अाइसीसीलाइ दिएकाे अन्तर्वार्ताकाे अनुवाद)
प्रकाशित मिति :- ५ चैत्र २०७४, सोमबार ०९:१३